Maalinta: Maarso 13, 2019
Dhismaha Saldhigga Guryaha Gaarka ah Wadooyin Gare oo Dheeraad Ah Oo Loogu Magac Daray Yahay Tijaabinta Jamhuuriyadda Turkiga Tareenka Waddooyinka TCDD 5. Agaasinka Iibsiga Gobollada (TCDD) 2018 / 707224 GCC Xarunta Degaanka oo leh qiime ku dhow 3.968.219,06 TL [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa shaacisay in la joojiyay diyaaradda Boeing 737 MAX 8 iyo Boeing 737 MAX 9. Bayaanka ay soo saartay Xafiiska Warfaafinta iyo Xiriirka Dadweynaha ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Digniinta Calaamadda Fare ee Marmaray
Tareenka rakaabka ee Istanbul ayaa la furay maanta kadib fasaxii sannadka 6. Maalintii ugu horreysay ee safarka tareenka waxaa calaamad u ahaa xiisadda soo laabashada. Bayaanka laga soo saaray Marmaray, Istanbul Card waxaa loo diraa dhibco soo celinta si loo helo khidmadaha soo celinta muwaadiniinta. [More ...]
sano 2018 by Agaasinka Guud ee State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkey waxaa la daabacay dhawaaqay saabsan codsadayaasha xerada. Ku dhawaaqida websaydhka 'TCDD' waxay ku xustay in codsiyada kaamka 2018 sanadka ee xarumaha raaxada TCDD ay bilaabeen. in Ogeysiisyada [More ...]
Dhismaha bakhaarada dhulka hoostiisa leh ee Halkapınar, oo loo dhisay İzmir tareennada dhulka hoostiisa mara ee Dawladda Hoose, ayaa aroortii dhacay. Raadinta laba waardiye oo darbiga ka hoosaysa ayaa sii socota. Halkapınar Dhulka hoostiisa [More ...]
Saraakiisha TCDD Sozcu.com.tr'n heli in, Waxaa saaka magaalada Istanbul gaadiidka Line muwaadiniinta overcharged waa ay ka warqabaan dhibaatada waa la qabtay, shirkadda IMM ayaa sheegay in lacagta laguu soo celin doonaa in muwaadiniinta helaan via BELBER. Gebze-Halkalı Khadka Tareenka Gawaarida [More ...]
Erdogan oo furay Marmaray una socday GebzeHalkalı khadka ayaa ku dhacay maalintii koowaad. Warka ku saabsan cilad farsamo ayaa sababay rakaabkii argagax. Waddo dheer oo tijaabo ah Marmaray, maalintii ugu horreysey ee dib-u-furidda burburka ayaa dhacday. [More ...]
Gebze Halkalı Qiimaha Tikidhada Ardayda ee Dhexdhexaadinta
Gebze Halkalı Qiimaha Bilaashka Ardayda Sare : Gebze - furay shalayHalkalı In kasta oo khadka tareenka ee magaalada ka agdhow uu ahaan jiray fogaan lagu safri karo daqiiqadaha 185, hadda 115 ayaa leh [More ...]
Duqa Magaalada Antalya Dawlada Hoose Menderes Türel wuxuu kahadlay balanqaadyadiisa la sameyn doono mudada cusub wuxuuna sheegay in hamigiisa ugu weyn uu yahay in tareenka dhulka hoostiisa ku yimaado Antalya. Duqa Magaalada Antalya Metropolitan Menderes Türel, Star TV Ana [More ...]
Gegada diyaaradaha ee ugu weyn adduunka madaxyada iyo 29 ayaa la furay Oktoobar 2018 oo laga furay Maddaarka Istanbul, tan iyo markii la aas aasay ay keentay su'aalo aan dhammaad lahayn oo ku saabsan. technology, [More ...]
Duqa Magaalada Yeşilyurt Mehmet Çınar ayaa yidhi, ümüz Xarunteena Farsamada ee Yeşilyurt ee Jaamacada Malatya Turgut Özal waxay u rogi doontaa albaabka galbeedka magaaladeena xarun soo jiidasho leh. Si loo sameeyo kaabayaasha gaadiidka ee Xaruntayaga Farsamo ee casriga ah oo raaxo leh [More ...]
Dowladda Hoose ee Karaman waxay sii wadaa dadaalkeeda ay ku bixinayso gaadiid nabadgelyo leh oo aamin ah magaalada oo dhan. Wasaaradda Arimaha Gudaha waxay ku dhawaaqday 2019 sanadka Trafik lugta mudnaanta leh ee Trafik ". Macnaha guud, Gaadiidka Dawlada Hoose ee Karaman [More ...]
Shaqada waxaa lagu dhammeystirey Mashruuca Baaskiilka iyo Race Road, oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu ee Fatsa. Isagoo sheegay in mashruuca laga hirgaliyay xeebta 2,5 km xeebta leh uu farqi u yahay xeebta Fatsa, Duqa Tekintaş wuxuu yiri: [More ...]